Guddoomiyaha UCID oo dadweynihii Rayaale Codka siiyay ugu baaqay inay Toobbad keenaan oo Illaahay Cafis weydiistaan | Xarshinonline News
Guddoomiyaha UCID oo dadweynihii Rayaale Codka siiyay ugu baaqay inay Toobbad keenaan oo Illaahay Cafis weydiistaan
Ceerigaabo,(NNN)- Hoggaanka Xisbiga UCID, ayaa naqdiyay socdaalka Madaxweyne Rayaale ee Gobolka Sanaag, isla markaana waxay ku tilmaameen in aanu daacad ka ahayn raadinta Ictiraafka iyo sidoo kale daryeelka maatida, gaar ahaan gobolka uu hadda socdaalka ku joogo ee Sanaag.
Murashaxa Madaxweynaha ee Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Guddoomiye-xigeenka Xisbigaas Aadan Maxamed Mire (Waqaf), oo shalay Dadweynaha reer Ceerigaabo shalay kala hadlay meel fagaare ah, ayaa Madaxweyne Rayaale iyo Xukuumaddiisa ku tilmaameen mid ka gaabiyay waxqabadkii loo igmaday, isla markaana waxay naqdiyeen socdaalka Madaxweynaha ee Sanaag.
Guddoomiye Faysal oo ka mid ahaa masuuliyiintii Fagaaraha kala hadlay Dadweynaha, ayaa sheegay in Madaxweynuhu awoodda maamul leeyahay, waxaanu xilka Wasiirnimo ku tilmaamay Karraani.
“Walaalayaal, reer Ceerigaabo maanta codkiinii waad muujiseen, maanta Ceerigaabo waxay cod dheer ku tidhi UCID baanu nahay. Walaalayaal dalkan Somaliland ilaa 60-kii waxa ka xumaaday hogaankii siyaasadda, anagu markaa waxaanu u nimi inaanu siyaasiyiin cusub soo saarno, waxaanu doonaynaa wixii 50 sano inaga xumaaday inay 26-ka June dib u hagaajino, waxaanu ku hagaajinaynaa caddaalad, midnimo waa shareecada islaamka, walaalayaal taasaanu idinku bushaaraynaynaa.” Ayuu yidhi Faysal, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Walaalayaal SNM-tu intay tawaxiidkii ku qorteen ayaa markii illaahay guushii siiyey ayaa intay iska xooreen ay habar-habar la soo baxeen, taasi waxay keentay in dawlada maanta joogta siddeed sano ayuu hayey madaxweynuhu. Habka aynu qaadanay ee madaxweynaha, wasiirku waa iska karaani, cidda awooda lihi waa madaxweynaha.”
Faysal Cali wuxuu Madaxweyne Rayaale ku dhaliilay wax-qabad-la’aan. “Madaxweynaha jooga maanta ee Daahir Rayaale waqtigii uu gacanta ku hayey, waqti uu ka nabad badnaa muu jirin, siddeed sanadood ayuu gacanta ku hayey, waxay soomaalidu tidhaahdaa raggu wuxuu leeyahay waxyar tare ee wax ma tare malaha. Laakiin waxaynu odhan karnaa Rayaale waa wax-ma-tare, maalintii uu dalka qabtay waxaynu dhisaynay hay’adihii, waxay ahayd in la naaxiyo, askarta derajo la siiyo, idaacad la sameeyo, lacagta la idinka badelo. Waxaas oo dhami ictiraaf umay baahnayn waxaynu qabsan karno ayey ahayd, kiish wayn buu soo qaatay. Dadkiina qofkii wax ka cunay waad arki doontaan isaga oo nolosha ku uray.” Ayuu yidhi Faysal.
Guddoomiyaha UCID waxa kale oo naqdiyay adeegyada Caafimaadka, Waxbarashada iyo qaar kale oo uu sheegay in aay dhammaystirnayn. Mar uu arrintaa ka hadlayayna wuxuu yidhi, “Walaalayaal maanta dalkeena meel qudha oo cusbitaal shaqaynayaa ma jiro, hay’adaha caaalamiga ahi M.C.H-yo ayey dhisaan, dugsiyo ayey dhisaan, M.C.H-ka ay dhisaan sariirtii way taalaa, dhakhtar male oo kalkaaliye caafimaad malaha, dugsiga ay dhisaan macalin malaha, iyadoo intaasoo dhami jirto, ayuu haddana wankiinii idinku qabsaday oo $12 dolar qaataa. Dadkii doortay Rayaale waxaan idin leeyahay illaahay u toobad keena wixii dambi uu galay waad la wadaagtaane, aakhirana waa la idin waydiinayaa.”
Guddoomiyaha UCID ayaa mar uu naqdiyayay socdaalka Madaxweynaha ee Gobolka Sanaag, wuxuu yidhi, “Walalaayaal maanta wuu idiin yimi, sharaftiinii ayuu ku ciyaarayaa, siddeed sano intuu iska seexday ayuu maanta diyaarad soo qaatay…Maanta waxaan doonaynaa kitaabka iyo sunnaha inaynu qaadano, inaynu dadka reer Somaliland tacliinta ka haqab tirno, waxaanan idiin sheegayaa. Walaalayaal waxa idiinku dambaysa iskuul aad lacag ka bixisaan maalintuu Rayaale kursiga ka dego. Waxaan doonaynaa in shan sano guddahood aanu wadooyinka isku xidhno, wadada u horeysa ee aan dhagax dhigi doonaa insha alla waa wada isku xidha Burco iyo Ceerigaabo…” waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Walaalayaal gobolka Sanaag dhibaatada haysataa waa biyo la’aan, waxaanu doonaynaa in dhibic kasta oo biyo ah oo cirka ka soo dhacda inaynu halkeena ku xejino.”
Sidoo kale, Guddoomiye Faysal waxa uu Xukuumadda Madaxweyne Rayaale ku dhaliilay in aanay sidii loogu talo-galay uga hawl-galin ictiraaf raadinta. “Walaalayaal markaynu ka hadalno ictiraafka, waxa caddaatay markaanu baadhnay in xukuumadda Rayaale ay maanta joogtaa inaanu daacad ka ahayn, Rayaale wuxuu inagu simayey dawladaha been beenta ah ee laga dhisayey Soomaaliya biriigga ayuu inoo qabtay, kolba markuu lahaa doorashadu ma dhacayso dibuu inoo ridayey Sh. Shariif buu inagu simayey, waananu baadhaynaa inuu daacad ka ahaa iyo in kale hogaankii loo dhiibtay, dadkaanu u soo gudbinaynaa warbixinta aanu soo saarno idinka ayaa xukumi doona. Haddaad tidhaahdan saamaxana waanu saamaxaynaa, haddaad tidhaahdaan sharciga keenana waanu keenaynaa, dalka khiyaano ayuu ka sameeyey ummad baa dooratay awood baa la siiyey inuu dadka ictiraaf u doono biriiguu u qabtay.” Ayuu yidhi Faysal, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Anagu ballan waxaanu idinku qaadaynaa waxaanu dhisaynaa dawlad adag oo xuduudeeda oo dhan joogta, lacagtaa waanu idinka badelaynaa insha alla. Walaalayaa gadhka in lala baxaa waa sune, gadhku kii hore maaha waa la ina soo galay wadaadku wadaadkii maaha, maanta ragagixiso ayaa la inaga dhigay islaam marka la arko diyaarada ayaa lagaa reebayaa wejigiibay inaga xumeeyeen walaalayaal.”
Dhinaca kale, waxa isna halkaa ka hadlay Guddoomiye-xigeenka UCID Aadan Maxamed Mire (Waqaf) oo hadalladiisii ay ka mid ahaayeen, “Waxaan markhaati ka ahay Ceerigaabo inay maanta muujisay codkeedii oo ay ku taageertay xisbiga UCID. Waxaan idin leeyahay 26-ka June inaad kaga dhabaysaan sidaa aad maanta ugu soo baxdeen inaad codkiina ugu muujisaan. Waxa kale oo aan markhaati ka ahay ninkii iska yimi (Madaxweyne Rayaale) ee aydaan idinku u yeedhan saaka salaadii ayuu ka kalahay halkan, isagoo ummadii iyo dadkiisii midna la hadal. Waxay ila tahay faqiina wuxuu warku igu soo gaadhay inay reer Ceerigaabo yidhaahdeen, adiga ayuun baa iska yimi ee anagu cod kuuma hayno, taasaa ka muuqatay markuu saaka (shalay) na sii dhaafay.” Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi Waqaf, “Ninkaasi waa nin iska tagay, waa ninkaa diyaaradda ku yimi ee garan kari waayey ummadiisa iyo dadkiisa waxay ku nool yihiin inuu soo eego ee iska tagay. Isaga waxaan leeyahay waa sidaa aad ku tagtay. Waxaan leeyahay reer Ceerigaabo, ninka siddeed sano idin soo xukumayey miyeynu maanta ka dhagaysanaa jidkii Burco iyo Ceerigaabo ayaan dhisayaa, Dekaddii Maydh baan dhisayaa, biyaan idiin galinayaa, wax walba waan idiin samaynayaa, hadda dhawr iyo toban cisho ayaa ka hadhay intuu gabbalkiisu dam noqonayey. Walaalayaal waxaan idin leedahay, midnimada iyo wadajirku waa ta horumarka lagu gaadho, waxaanu anagu idiin sidnaa bushaaro iyo ballan-qaad, waxaan idin leeyahay haddii la idiin yimaado habeenkii oo la idin yidhaahdo reer hebel iyo reer hebel, taa mid ka duwan ayaanu wadnaa. Kitaabka iyo sunada rasuulka ayaanu wadnaa.”
Filed under UCID, xisbi
← Kuwii Ku Baaqee…..Kulmiye Ku Biiray Waa Baayadooda iyo Barwaaqadooda.
“Waa meel-ka-dhac wayn in Xisbigii uu Aabbahay aasaasay laga yidhaahdo Geeridiisii faa’iido ayay ahayd” →